पान्डा Pow |
बिजुली बक्स खेल, एक शीर्ष स्लट साइट नयाँ भिडियो स्लट पान्डा Pow शुरूआत. यो स्लट एक पाँच रील र बीस-पाँच भुक्तानी लाइनहरु छ. यो चिनियाँ कार्टून को विषय मा आधारित छ 'कुंग-फू bear'.The स्लट एक अद्वितीय बोनस सुविधा भनेर सम्म अनुदान प्रदान गर्दछ 20 सुरुमा तर जो सम्म प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ पुन ट्रिगर सुविधा उपस्थिति निःशुल्क spins 40 निःशुल्क spins यसलाई अझ आकर्षक बनाउँछ. एक पनि एक विशाल जीत बनाउन स्ट्याक प्राप्त जो रील मा शानदार सुन pandas लागि हेर्नु पर्छ. तपाईं नयाँ स्लट बाहिर जाँच जस्तै यदि शीर्ष स्लट साइट त्यसपछि यो स्लट पक्कै तपाईं शर्त हरेक मुद्रा लायक छ.
यो बोल्ड, कुंग-फू-मायालु, cartoonish भालु को पान्डा Pow मा केन्द्र चरण शीर्ष स्लट साइट 'चट्याङ्ग बक्स खेल' द्वारा प्रस्तावित लिन्छ. यो खेलमा, एक खेलाडी प्रति स्पिन £ 0.25 को न्यूनतम रकम र प्रति स्पिन £ 1000.00 को अधिकतम रकम खेल्न सक्छ. साथै, एक सिक्का दायरा £ को एक न्यूनतम दायराबाट प्रति लाइन 0.30 सिक्का प्रति लाइन 100 सिक्का £ गर्न समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ. यो खेलाडी प्रतिशत एक फिर्ती छ 95-97%.
के त्यसैले अद्वितीय छ?
हामी सधैं रील को दृश्य डिजाइन शीर्ष स्लट साइट विकास i.e चट्याङ्ग बक्स खेल बारे थाहा गर्न जिज्ञासा छ. आफ्नो नयाँ भिडियो स्लट पान्डा Pow यस सूचीमा नवीनतम साथै छ र क्यासिनो खेलाडीहरू बीच एक विशाल पहिचान प्राप्त गरेको छ. को रील धेरै राम्रो तरिकाले चिनियाँ शैली उत्कीर्णन संग सजाया गहिरो रातो पृष्ठभूमि मार्फत सेट.
खेलाडी को लालटेन लागि बाहिर हेर्नु पर्छ, प्रशंसक र सुन सिक्का, तिनीहरू हरेक एक प्रत्येक payline लागि सय सिक्का सम्म को पेआउट प्रदान गर्दछ रूपमा. यदि सुन जस्तो माछा द्वारा सामेल दुई सय coins.The मानक प्रतीक बाहिर भन्दा alluring प्रतीक गर्न winnings बढाउन सक्छ यी सबै प्रतीक एक बच्चा पांडा छ- एक रूख शाखामा आराम. यो प्रतीक तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् 2, 5, 50, 125 वा 500 सिक्का एक खेलाडी एक भूमि गर्न सक्षम छ भने, दुई, तीन, चार वा एक मा पाँच 25 खेल रेखाहरूको तिर्न.
Pandas र फ्री Spins
यो खेल को आँखा तेतैतिर प्रतीक को एक दोस्रो पांडा छ- रातो Headband लगाएका. यो स्क्याटर प्रतीकको रूपमा साथै एक जंगली रूपमा कार्य र यो अन्य सबै प्रतीक विकल्प सक्नुहुन्छ. यसबाहेक, यो पनि निःशुल्क बोनस सुविधा सक्रिय मदत गर्न सक्छ. यो केवल मा जमीन गर्न सक्नुहुन्छ3मध्य रील र एक विशाल जीत को लागि एक विजेता संयोजन फारम गर्न सक्छन्. पाँच वा यो बढी अवतरण निःशुल्क बोनस सुविधा सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ र जसमा खेलाडी सम्मानित छन् निम्नानुसार-
5 लागि निःशुल्क spins5पान्डा छरिन्छ.
8 लागि निःशुल्क spins6पान्डा छरिन्छ.
12 लागि निःशुल्क spins7पान्डा छरिन्छ.
15 लागि निःशुल्क spins 8 पान्डा छरिन्छ.
20 लागि निःशुल्क spins9पान्डा छरिन्छ.
साथै, एक सजिलै नयाँ स्ट्याक प्रतीक हेर्न सक्नुहुन्छ – सुनौलो पान्डा निःशुल्क spins मा रील थपिएको छ. यो प्रतीक पूर्ण स्ट्याक प्रकट गर्दा प्लेयर रील मा हिट 2, 3,4र 5. यसबाहेक, एक विजेता संयोजन गठन गर्ने क्रममा, यो प्रतीक स्क्याटर लागि बाहेक अन्य सबै प्रतीक प्रतिस्थापन गर्न सक्छ. एउटै स्पिन तिनीहरूलाई को धेरै अवतरण, एक विशाल इनाम कमाउन सक्नुहुन्छ.
शीर्ष स्लट साइट द्वारा पान्डा Pow i.e चट्याङ्ग बक्स खेल सधैं स्लट प्रेमीहरूको को आशा पूरा भएको छ. विशेष बोनस सुविधा संग, यो खेल एकदम लत भएको छ. यो मध्यम भिन्नता छ र एक आफ्नो खम्बा को 500 अप गर्न × अधिकतम कमाउन आशा गर्न सक्छौं. यो रोमाञ्चक खेल सुरु गरेर शीर्ष स्लट साइट रूपमा बिजुली बक्स स्पष्ट सिद्ध छ! यो हाम्रो आफैलाई जाँच!